Wararka - Bandhigga Baaskiilka Shiinaha ee Shanghai waxaa la qabtaa sanadkiiba hal mar
Bandhigga Baaskiilka Shiinaha ee Shiinaha ayaa la qabtaa sanadkiiba mar
Bandhigga Baaskiilka Shiinaha ee Shanghai ayaa la qabtaa sanadkiiba mar, waa mid ka mid ah bandhigyada ugu waaweyn uguna saameynta badan adduunka, Bandhiggii ugu dambeeyay ee Shanghai ayaa soo jiitay in ka badan 6,500 waab, in ka badan 2,000 oo carwo, tirada ganacsatada ayaa gaadhay 200,000 oo qof, oo lagu qabtay Xarunta Shirarka iyo Carwada Qaranka ee Shanghai, aagga bandhiggu wuxuu gaadhay 250,000 oo mitir murabac ah. Toban teendhooyin ayaa isku mar la furaa, waa miisaan aan horay loo arag
Bandhigga Baaskiilka Shiinaha ayaa noqday mid ka mid ah kuwa ugu saameynta badan bandhigyada baaskiil ee adduunka. Bandhigu wuxuu ku adkeysanayaa dhismaha carwadda heerka koowaad oo leh karti xirfadeed. Xamaasadda adeegga aan kala go 'lahayn iyo tayada adeegga sida had iyo jeer u abuurtay koox bandhig xirfadeed oo tayo sare leh warshadaha.
Bandhigga 29-aad ee Baaskiilka Caalamiga ah ee Shiinaha 2019 (oo hadda kadib loo yaqaan "Bandhigga Shiinaha") ayaa la qaban doonaa 6-da Maajo, 9-keeda ee Xarunta Shirarka Qaranka iyo Carwadda (Shanghai). horumar ”, bandhigan ayaa si buuxda u soo bandhigi doona isbedelka cusub ee soo saarida wax soo saarka baaskiilka, tikniyoolajiyadda cusub ee warshadaha baaskiilka, guulaha cusub ee caqliga, lithium-ion iyo baaskiil koronto fudud, iyo fikradda cusub ee baaskiilku u keenayo safarka cagaaran iyo madadaalada aadanaha Bandhigu wuxuu kuu geyn doonaa adduunyo laba lugood leh oo leh fursado aan la koobi karayn!
Doon ka hor imaadka taagan istaagna imtixaanka
Kadib tobanaan sano oo horumar ah, warshadaha Baaskiilka ee Shiinaha waxay noqdeen wakiilka miisaanka warshadaha ugu weyn aduunka, silsiladda ugu dhameystiran ee warshadaha iyo awooda wax soo saar ee ugu xoogan. Warshadaha Baaskiilka ee Shiinaha ayaa xasilloonaa 2018, in kasta oo ay jiraan arrimo badan sida hoos u dhac weyn oo ku yimid wax soo saarka. Baaskiilada la wadaago, khilaafaadka ganacsiga ee u dhexeeya Shiinaha iyo Mareykanka, iyo tallaabooyinka ka hortagga daadinta iyo ka hortagga canshuuraha ee Midowga Yurub. Sida laga soo xigtay tirakoobka Ururka Baaskiillada Shiinaha, wadarta wax soo saarka Baaskiilada ee 2018 waxay ahayd 73.201 million, hoos u dhacday 17.1% sanadkii; Qiyaasta dhoofinta waxay ahayd 59.272 milyan oo cutub, ilaa 5.1% sanadkii sanadka; Soosaarka baaskiilada korontada wuxuu gaadhay 32.776 milyan oo unug, ilaa 5.8 boqolkiiba sanadkii .Eport-ka wuxuu gaadhay 1.877 milyan cutub, ilaa 10.4 boqolkiiba sanadkii.
Balance Baaskiil, Baaskiil Balance Balance, 20 Baaskiil Inch / Baaskiil, Baaskiil Balance Caruurta, Baaskiiladaha, Balance Baaskiil,